မုံရွာတွင် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်းရေး Helmet Day လှုပ်ရှားမှု စတင် - Yangon Media Group
မုံရွာတွင် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်းရေး Helmet Day လှုပ်ရှားမှု စတင်
မုံရွာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ – စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ် ၃၇ မြို့နယ်တွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် နှစ်စဉ်လူသေဆုံးမှု အများဆုံးအ ဖြစ် ရပ်တည်နေသော မုံရွာမြို့၌ ဆိုင်ကယ်စီးလျှင် ဆိုင်ကယ်စီးဦး ထုပ်ဆောင်းရေးအတွက် လှုံ့ဆော် သည့်အနေဖြင့် Helmet Day လှုပ်ရှားမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက် တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အမှတ် (၁၇) ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ်ဖွဲ့ ခွဲမှူးရုံး(စစ်ကိုင်း)မှ သိရသည်။
ကမ်ပိန်းတွင် မုံရွာဆိုင်ကယ် ချစ်သူများအဖွဲ့နှင့် လူမှုကူညီရေး အသင်းများ စုပေါင်း၍ ဆိုင်ကယ် စီးနင်းစဉ် ဦးထုပ်၊ ဘက်မှန်၊ ရှေ့ နောက်နံပါတ်ပြားများပါသော ဆိုင်ကယ်စီးရေ ၁ဝဝ ကျော်ဖြင့် ပညာပေးဆိုင်းဘုတ်ငယ်များ ကိုင် ဆောင်ကာ မြို့တွင်းသို့ လှည့်လည် စီးနင်းခဲ့ကြသည်။
”ဒီကမ်ပိန်းကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းလုပ်မှာပါ။ မုံရွာမြို့ ကိုဝင်တဲ့ အဝင်ပေါက်အားလုံးမှာ လည်း ယာဉ်ထိန်းရဲနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ တွေ ထားပြီး ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် မပါရင် မြို့ထဲအဝင်မခံဘူး။ မြို့ တွင်းမှာလည်း အဲဒီနေ့မှာ ဖမ်းဆီး ရေးတွေအရှိန်မြှင့်လုပ်မယ်။ ရုံးဖွင့် ရက်မှာ တရားစွဲဆိုပြီး တရားရုံးမှာ အမှုအလိုက် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ်”ဟု အမှတ်(၁၇) ယာဉ်ထိန်းရဲဒုတပ် ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး (စစ်ကိုင်း)မှ ရဲမှူးကိုကို နိုင်က ပြောသည်။
ကမ်ပိန်းနေ့အပြင် အခြား သော နေ့များတွင်လည်း မြို့တွင်း ၌ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်း သော ယာဉ်များကို ဖမ်းဆီးအရေး ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖမ်းဆီးခံရသူ များအား တရားရုံးတွင် ဒဏ်ငွေ ဆောင်စေပြီးနောက် အရည်အ သွေးကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းသင့်သော ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ချက်ချင်း ဝယ်ယူစေရန်လည်း စီစဉ်ဆောင် ရွက်နေကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်စီး ဦး ထုပ်ဆောင်းရေး လှုပ်ရှားမှုကို တိုင်းအစိုးရရုံးစိုက်ရာ မုံရွာမြို့တွင် သာမက ကျန်သောခရိုင်မြို့ကြီး များတွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး မုံရွာမြို့တွင် ယခု နှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်မှစ၍ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်အထိ စည်းကမ်း ပျက် ဆိုင်ကယ်အစီး ၄ဝဝ နီးပါး ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သော ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်က မုံရွာမြို့တွင် ယာဉ်တိုက်မှုပေါင်း ၁၇ဝ ဖြစ်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၅ဝ၊ ဒဏ်ရာရသူ ၃ဝဝ ကျော်ရှိခဲ့ ကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှတ် တမ်းများအရ သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကြေးနီရိုင်းနှင့်ရွှေတူးဖော်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ သေ
AA သည် KIA ၏ မွေးစားသားဖြစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အမာခံနယ်မြေ တည်ဆောက်လာခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက?
၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်က အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသော အာဂျင်တီးနား အမျိုးသမီး ပြန်လည် လွတ်ြေ?
အိမ်ရာမဲပေါက် နှစ်ကြိမ်မြောက်သည့်တိုင် မဆက်သွယ်သူများကို ထပ်မံလျှောက်ထားခွင့် ပြုတော့မည??
အာဆင်နယ်၏ ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် မလွယ်ကူဟု ဒီဘရူနီ ဝန်ခံ
မုံရွာစက်မှုဇုန် အတွင်း မီးသတ်ယာဉ် ဝင်နိုင်ရန် လမ်းများချဲ့ဖောက်ရာတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ??